यी हुन् कोरोना महामारीको बेला पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने ५ बीमा कम्पनी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > यी हुन् कोरोना महामारीको बेला पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने ५ बीमा कम्पनी
यी हुन् कोरोना महामारीको बेला पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने ५ बीमा कम्पनी
काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा ३ वटा जीवन बीमा र २ वटा निर्जीबन बीमा सहित ५ वटा कम्पनीले कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाली लिएका छन् ।
यो वर्षको पहिलो महिना अर्थात वैशाखमा जीवन बीमा कम्पनीबाट ११ जनाले जगिरबाट हात हुनु परेको छ भने निर्जीन बीमा तर्फ ४ जनाको जागिर गएको छ । बीमा समितिका अनुसार जीवन बीमा तर्फ एशियन लाइफ इनस्योरेन्सले ७ जनालाई जागिरबाट निकालेको छ भने सिजिजन लाइफले १ जना र महालक्ष्मी लाईफले ४ जनालाई जागिरबाट निकाले को छ ।
यता निर्जीबन बीमा तर्फ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ जना र अजोडले ३ जनालाई जागिरबाट निकालेको छ । यस्तै वैशाख महिनामा जीवन बीमा कम्पनीमा समग्रमा ४७ जना कर्मचारी थपिएर ५६१४ जना पुगेका छन् । यस्तै निर्जीबन बीमा कम्पनीमा वैशाख महिनामा ५७ जना कर्मचारी थपिएका छन् । अहिलेसम्म १९ वटा निर्जीबन बीमा कम्पनीमा ५०६३ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
वैशाखसम्मा राष्ट्रिय बीमा संस्थामा १२७ जना कर्मचारी रहेका छन् । यस्तै मेट लाइफमा १५४, गुँरास लाइफमा २३३, प्राइम लाईफ २७८, ज्योती लाइफमा ४२०, सन नेपाल लाइफमा ३४९ जना, रिलायन्स लाइफमा २३६ आईएमई लाइफ २५७, सुर्य लाइफमा २७१ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
यस्तै नेशनल लाइफले वैशाखमा ३ जना कर्मचारी थपेर ३६१ जना पुर्याएको छ । नेपाल लाइफले १३ जना थपेर ६३६ जना पुर्याएको छ भने लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ४ थपेर २४६, यूनियन लाइफ १६ कर्मचारी थपेर ४०८ जना पुर्याएको छ । यस्तै रिलायबल नेपाल लाइफले १५ जना कर्मचारी थपेर ३१८, सानिमाले ८ जना थपेर २२० र प्रभु लाइफमा १७४ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
यस्तै निर्जीबन बीमा कम्पनीमा वैशाख महिनामा ५७ जना कर्मचारी थपेर ५०६३ जना पुगेका छन् ।बीमा समितिका अनुसार वैशाख महिनामा अजोडले ३ जना कर्मचारील निकालेको छ भने प्रिमियरले १ जना हटाएको छ । हाल अजोडमा २५८ र प्रिमियरमा ३०४ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
यस्तै नेपाल इन्स्योरेन्समा २७६, दि ओरियन्टलमा ७३ जना, नेशनलमा ६८ जना, सगरमाथामा ४०० जना र प्रुडेन्सियलमा २०८ जना कर्मचारी रहेका छन् । यी कम्पनीले कर्मचारी निकालेका पनि छैनन भने नयाँ भर्ना गरेका पनि छैनन् । यता हिमालयन जनरलले १ जना थपेर १९५, युनाइटेड इन्स्योरेन्स ५ जना थपेर २५०, एभरेष्टले २ जना थपेर १९१, नेको १० जना थपेर ४४२ जना, प्रभु इन्स्योरेन्स १ थपेर २०३ जना र आईएमईले ५ जना थपेर २७४ जना शिखर इन्स्योरेन्सले २ थपेर ६१२ जना, लुम्बिनी जनरलले ९ जना थपेर २२५ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्सले २ जना थपेर ३८८, शिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ४ जना थपेर ३३१, जनरल इन्स्योरेन्स ७ जना थपेर १९५ र सानिमा जनरलले १३ जना थपेर १४० जना कर्मचारी रहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा ५ वटा बीमा कम्पनीले १५ जनालाई जागिरबाट निकालेका छन् ।
कोरोना महामारीको समयमा ३ वटा जीवन बीमा र २ वटा निर्जीबन बीमा सहित ५ वटा कम्पनीले कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाली लिएका छन् ।
यस्तै नेपाल इन्स्योरेन्समा २७६, दि ओरियन्टलमा ७३ जना, नेशनलमा ६८ जना, सगरमाथामा ४०० जना र प्रुडेन्सियलमा २०८ जना कर्मचारी रहेका छन् । यी कम्पनीले कर्मचारी निकालेका पनि छैनन भने नयाँ भर्ना गरेका पनि छैनन् ।
यता हिमालयन जनरलले १ जना थपेर १९५, युनाइटेड इन्स्योरेन्स ५ जना थपेर २५०, एभरेष्टले २ जना थपेर १९१, नेको १० जना थपेर ४४२ जना, प्रभु इन्स्योरेन्स १ थपेर २०३ जना र आईएमईले ५ जना थपेर २७४ जना शिखर इन्स्योरेन्सले २ थपेर ६१२ जना, लुम्बिनी जनरलले ९ जना थपेर २२५ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
२०७८ जेष्ठ २१ गते १६:५८ मा प्रकाशित
नेप्सेमा चार कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
ग्लोबल आइएमई बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबीच सम्झौता
अनावश्यक विद्युत प्रयोग गरिरहनुभएकोछ ? ऊर्जामन्त्रीको कारवाहीमा पर्नु होला है !